AKHRISO MAGACYADDA:- Qoraal ka soo baxay Maxkamad ku taalla Maraykanka oo lagu soo bandhigay Magacyadda Ragg gacansaar la lahaayeen ragii isku qarxiyey Muqdisho – idalenews.com
Faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxayso saddex nin oo Somali ah oo kala haysta dhalashadda dalalka UK iyo Sweden, kuwaasi oo sannadkii hore lagu soo qabtay Hawlgal ay FBI-da ka fulisay dalal ku yaalla Qaaradda Africa.
Ragaasi oo sannadkii hore la soo taagay Maxkamadda Federalka ee Brooklyn ayaa waxay ahaayeen kuwo aan macluumaad dheeraad ah laga haynin macluumaad la xiriira magacyadooda iyo sababaha loo soo xiray.
Dukumentiyo Maxkmadeed oo shalay oo Arbaco ah soo baxay ayaa lagu sheegay inay saddexda nin lagu xiriirinayo inay taageersan yihiin Kooxda Alshabaab Somalia oo ay Dowladda Maraykanka ku dartay Liiska Kooxaha Argagixisadda Caalamiga.
Wargeyska the NY Times ayaa waxa uu cadadkiisa manta soo daabacay in saddexda Eedeysane ee Soomaalida ku xiran dalka Maraykanka lagu kala magacaabo:-
1- Mahdi Hashi oo haysta Dhalshadda dalka Britain.
2- Mohamed Yusuuf oo haysta Dhalashadda Swedish
3- Ali Yassin oo aan la sheegin dhalashadda uu haysto, inkastoo uu kaalmo ka helayo Safaaradda Sweden ee Maraykanka.
Dukumentiga ayaa lagu xusay in raggaasi lagu soo qabtay Qaaradda Afrika, xilli ay ku soo jeedeen dalka Yeman,
Qoraalka Maxkamadda oo aan si rasmi ahaan loo shacinin ayaa lagu xusay inay Saddexdaasi asalkoodu Soomaalida yahay la ogaaday inay gacansaar la lahaayeen Muwaadiniin Somali-American, kuwaasi oo iyagu horey isku qarxiyey magaalladda Muqdisho.
Dacwad-oogayaasha Maraykanka ayaa sheegay inay raggaasi u socdaaleen dalka Somalia, si ay ugu biiraan Kooxda Alshabaab ee la midowday Ururka Alqaacida.
Dukumentiga waxaa lagu muujiyey inay raggaasi gacansaar la lahaayeen Muwaadiniin Maraykan ah oo ka soo jeeda Mujtamaca Soomaalida ku nool Goballka Minnesota, oo lagu kala magacaabo Shirwac Ahmed and Farah Mohamed Beledi, kuwaasi oo dhowr sanno ka hor isku qarxiyey magaalladda Muqdisho.
Dukumentiga Maxkamadda waxaa kaloo lagu sheegay inay Bishii October ee sannadkii 2008-dii, Maamulayaasha Swedish duubeen Wada Sheekeysi Telefoonka ku dhex maray Labada Eededeysane ee Maxamed Yuusuf iyo Ali Yasin Ahmed, oo ay kaga wada hadleen qorshahooda ku aadan inay Somalia u safraan, si ay ugu biiraan Kooxda Alshabaab.
Dukemntiga wxaa kaloo lagu sheegay in Eedeysanaha Ali Yasin Ahmed mar kale cod Telefoon laga duubay sannadkii 2009-kii, wax yar kadib, markii fal isqarxin ka dhacay bar kontorool oo ay Ciiddamadda Dowladda ku lahaayeen magaalladda Muqdisho.
Eedeysanaha ayaa codka laga duubay ku xusay inuu aqoon u lahaa mid ka mid ah kuwii isku qarxiyey Muqdisho.
Xigasho:- NY Times.
Madaxweynaha Dalka Somalia Oo Lagu Soo Dhaweeyay Magaalada Adis Ababa”DAAWO+SAWIRO